बि.सं.२०७४ साल मङ्सीर १६ गते शनिवारको राशिफल
न्यूजअभियान | प्रकाशित मिति : २०७४ मङ्सिर १६ शनिबार |
नेपाली मितिः वि.सं. २०७४ । नेपाल सं. ११३८ । योग सं. ३८ । मङ्सीर महिनाको १६ गते शनिवार ।
अँग्रजी मितिः ई.सं. २०१७ डिसेम्बर महिनाको ०२ तारिख ।
तथीः दक्षिणायन, हेमन्त ऋतु मार्गशीर्ष शुक्लपक्षको चतुर्दशी तिथी ।
योगः परिध योग, १२ः५६ बजे पछि शिव योग ।
नक्षत्रः भरुणी नक्षत्र, ११ः२४ बजेपछि कृतिका नक्षत्र ।
करणः गर करण १३ः१८ बजेसम्म उपरान्त वणिज करण ।
चन्द्रमाः मेष राशिमा, १७ः०६ बजेपछि वृष राशिमा ।
काठमाडौंमा सूर्योदयः ०६ः३९ बजे ।
काठमाडौंमा सूर्यास्तः १७ः०६ बजे ।
राहुकालः०९ः१५ बजेपछि १०ः३४ बजेसम्म ।
यात्राः अग्नि दिशाको लागि उपयुक्त ।
मेष राशि हुनेहरुको लागि आजको दिन ग्रहको केही बाधक अबस्था हुँदाहुँदै पनि ईज्जत तथा मानप्रतिष्ठामा विकास हुनेछ । दिन मनोरञ्जन एवम् खुशियालीप्रद रहने छ । मनोवाञ्छित स्वादिष्ट भोजनद्वारा मेजमानी मिल्नसक्ने छ । इष्टमित्रको आगमन हुने र कसैबाट उपाहार पनि मिल्नसक्ने गोचर स्थिति रहेको छ भने पारिवारिक सौहार्दता बढ्ने छ । नयाँकाम वा शेयर आदिको लगानीको अवसरको पनि सम्भावना देखिन्छ । पेशागत कामकार्यमा लाभ एवम् सफलता प्राप्त हुनेछ । आज यहाँलाई एक अङ्क, रातो रङ्ग र ग्रहबाधा निवारणको लागि हनुमानवीरको दर्शन भक्ति गर्नुु शुभकर हुनेछ ।
वृष राशिका व्यक्तिहरुको लागि आजको दिन सजिलोसँग काम भइहाल्न भने अल्लि गार्हो पर्ने देखिएको छ । आकस्मिक रुपमा खर्चका बहानाहरु बढ्ने र काममा अबरोध सृजना हुनसक्ने सम्भावना रहेकोले संघर्षको सामना गर्ने मानसिक तयारीमा बस्नु उपयुक्त हुनेछ । अल्लि बढी मेहनत गरेर मात्रै सफलता प्राप्त गर्नसकिएला । मान्यजनलाई भेट्गर्नु, यात्रा गर्नु, नगरी नहुने काममा खर्च गर्नु जस्ता कार्य आज सम्पादन गर्नु बुद्धिमानी हुनेछ । आज यहाँलाई तीन अंक, पहेंलो रङ्ग र त्याग वा दानको व्यवहार उपयुक्त हुनेछ ।
मिथुन राशिका व्यक्तिहरुको लागि आजको दिन यद्यपि अर्थकर हो तर पनि अपेक्षा गरेजति आर्थिक उपलब्धि हुन अबरोध कठिन पर्नसक्ने छ । आश्वासन मिलेको काम समयमै नभइदिँदा अल्लि दिक्कत लाग्नसक्ने छ । तथापि शरीरमा स्फुर्ति र काममा रुचि बढ्ने, स्वजनबाट मद्दत मिल्ने, समस्याको निकास निस्कने र दैनिकी व्यवसायबाट केही लाभ गर्नसकिने छ । आज ठूलो उपलब्धि खोज्नु भन्दा पनि भौतिक कर्म सम्पादनलाई प्रार्थमिकता दिनु बुद्धिमानी हुनेछ । जसबाट पछि लाभ उठाउन सकिनेछ । आँट साहासपूर्वक कुनै कार्यको लागि पूर्वतयारी पूरा गर्ने जस्ता कार्यमा मन दिनु उचित हुनेछ । दुई अङ्क, सेतो तथा ध्वाँसे रङ्गको प्रयोग र भैरवदेव श्रद्धाभक्ति आराधना गर्नु तथा कुुकुरको सेवा गर्नु उपयुक्त हुनेछ ।
कर्कट राशिका व्यक्तिहरुको लागि आजको दिन अपेक्षित उपलब्धि हुननसके पनि जनसंपर्क बढ्ने र तुलनात्मक रुपमा केही सहजवातावरण सृजना हुनेछ । कामकार्य तथा पेशा वा व्यवसायको क्षेत्रबाट आंशिकलाभ पनि हुनेछ । जसले गर्दा केहीहद्सम्म मानसिक सन्तुष्टि मिल्ने र साहस बढेर आउनेछ । तुरुन्तै फल प्राप्त गर्न नसकिएपनि केही महत्त्वाकांक्षी योजनाको बारेमा मानसिक चिन्तन तथा सरसल्लाह एवम् विचारविमर्श हुनसक्नेछ । मानसम्मान पाइने र भविष्यको लागि आश्वासन पनि मिल्नसक्ने छ । आशा गरेकै जति नभएपनि औकात अनुसारको पदप्रतिष्ठा र जिम्मेवारी मिल्नसक्ने छ । आज यहाँलाई गुरुजनको आर्शिवाद लिएर अघिबढ्नु शुभकर हुनेछ ।
सिंह राशि हुनेहरुको लागि आजको दिन सकारातमक मान्नसकिन्छ । पेशा तथा व्यवसाय अनुसारको सफलता मिल्नसक्ने गोचरले युक्त भएको दिन रहेको छ । उद्योग फस्टाउने छ, उच्चवर्गसँग भेट तथा संपर्क स्थापित हुनेछ, मानसम्मान एवम् पदप्रतिष्ठा प्राप्त हुनेछ । धार्मिक–आध्यात्मिक चिन्तनको विकास हुने तथा सकारात्मक भावनाले प्रसय पाउनेछ । योगमार्गीहरुको लागि दिन विशेष उपलब्धिमूलक हुनसक्ने छ । यो राशि हुने आमव्यक्तिको हकमा बा“की रहेको कार्य पूर्ण गर्नसकिने र आर्थिक पक्षमा पनि सुधार आउनेछ ।स्वजनसँग भेटघाट हुने तथा विशेष जरुरीमा सहयोग पनि मिल्ने हुनाले मनोबल पनि बढ्दै जाने र सफलता मिल्ने दिन छ ।
कन्या राशि हुनेहरुको लागि आजको दिन त्यति अनुकूल मान्न नसकिने देखिएको छ । ग्रहको प्रतिकूल अवस्थाले यहाँको स्वास्थ्यमा प्रभाव गर्नसक्ने छ । कार्यक्षेत्रमा पनि संघर्ष बढ्ने तथा अबरोध सृजना हुनसक्ने सम्भावना रहेकोले होसियारी अप्नाउन जरुरी देखिन्छ । संयम नगुमाई धैर्य गर्नाले सम्भावित खतरा टार्नसकिने छ । आहारविहारमा सजगता अप्नाउनु होला । आठ अंक, रातो रङ्गको प्रयोग आज यहाँको लागि उपयुक्त रहनेछ भने आफ्नो इष्टदेवको श्रद्धाभक्तिलाई बढाउनु विशेष हितकर हुनेछ ।
तुला राशिहुनेहरुको लागि आजको दिन जीवन साथी वा प्रेमिको गुनासाको सामना गर्नपर्नेछ । तथापि आमोद–प्रमोद तथा विलासवृतिप्रद दिनचर्या व्यतित हुनेछ । कसैकसैलाई गलतनियत भएको विपरितलिङ्गीको झमेला पर्नसक्ने खतरा पनि छ होस पुर्याउनु पर्ला । व्यवसाय तर्फ सामान्यभए पनि उन्नति हुनाले आर्थिक सङ्कलन हुनेछ । औपचारिक कार्यक्रम आदिमा पनि सरिक हुनपाइने सम्भावना छ । यात्राको पनि योग देखिएको छ । आज यहाँको लागि सात अंक, सेतो रङ्गको प्रयोग फापकर हुनेछ भने साढेसाती शनिको दुष्प्रभाव भोगिरहनु भएको यहाँले शनिशान्तिको कुनै उपाय अवलम्बन गर्नु शुभप्रद हुनेछ ।
वृश्चिक राशिहुने व्यक्तिहरुको लागि आजको दिन केही पराक्रम बढ्ने छ । तथापि मुख्य एवम् महत्त्वपूर्ण काममा संघर्ष देखिएको छ, जस निवारणको लागि गुरुजनको आर्शिवाद लिनु वा विद्वानजनलाई खुशि बनाउनु बुद्धिमानी हुनेछ । बाँकी गोचर स्थिति अनुकूल नै छ । शारीरिक बल बढ्ने, शत्रु मुकाविलामा वियजी भइने, आँटेताकेको काम अगाडि बढ्ने देखिन्छ । व्यापार व्यवसाय तथा पेशाकर्ममा सफलता र लाभ मिल्ने छ । समर्थक बढ्नेछन् । यात्रा योजनाको पनि सम्भावना देखिएको छ । घमण्ड नगर्ने र समयको सदुपयोगमा ध्यान दिने गर्नु आज यहाँको लागि बुद्धिमानी हुनेछ ।
धनु राशि हुनेहरुको लागि आजको दिन ठिकै स्वरुपमा देखिएपनि तपाईमा अल्लि कडामिजास देखिनसक्ने सम्भावना छ । मानसिक योजना तथा आन्तरिक सल्लाह भन्दा फरक ढंगले सवाल अघि बढ्नसक्ने छ । कसैकसैलाई क्रोधको पनि विकास हुनसक्ने कुरालाई नकार्न सकिन्न । पछि मनोवैज्ञानिक पछुतो पर्नसक्ने बोलीवचन वा फुर्तिफार्ति हुने तथा गोपनीयता खुस्कन सक्ने सम्भावना छ ख्याल पुर्याउनु होला । तथापि सौम्यसोँचबाट अघि बढेमा प्रयत्न गर्नाले व्यवसायिक क्षेत्र र सन्तानको क्षेत्रमा देखिएको तनाबलाई व्यवस्थापन गर्न सकिनेछ । बेतुकको संवादको बाहनामा जम्मा हुनेहरुले तपाईको कार्यमा अल्झन ल्याउनसक्ने कुराप्रति होसियारी गर्नुहोला । विद्यार्थीको लागि विद्या बढ्नसक्ने छ ।
मकर राशिहुने व्यक्तिहरुको लागि आजको दिन बोली व्यवहारमा केही सावधानी अप्नाउनु पर्नेछ । वादविवाद तथा मनमुटाव जन्य प्रतिकूलताको सम्भावना रहेकोले होसियारी पुर्याउन जरुरी देखिन्छ । मानसिक सोँचमा पनि संकिर्णता बढ्नसक्ने छ भने स्वास्थ्यमा पनि केही मन्दि आउनसक्ने छ । पारिवारिक समस्या थपिने र गर्नलागेको काममा विलम्ब हुने सम्भावना देखिन्छ । धैर्यतापूर्वक सकारात्मक भावनाले आफ्नो कार्यक्षेत्रमा खटिरहनाले केही लाभ भने गर्नसकिने छ । आज चार अंक, सेतो रङ्गको प्रयोग यहाँको लागि उपयुक्त हुनेछ । आज यहाँलाई भगवान संकटमोचन हनुमानको आराधना र आमा वा आमासमानकी मातृशक्तिको आर्शिवादले विघ्नबाधा हटाउन मद्दत गर्नेछ ।
कुम्भ राशिका व्यक्तिहरुको लागि आजको दिन पौरखीलो ग्रहगोचर परेको छ । आ“ट जोश जा“गर र पराक्रम बढाउने ग्रह परेको छ । नविन कार्ययोजना बन्नाले महत्त्वाकांक्षा पनि बढ्नसक्ने देखिन्छ । व्यवसायमा प्रगति तथा लाभ एवं सफलता र श्रीबृद्धि हुनेछ । स्फुर्तिकर ग्रहयोग परेकोले पौरख प्रदर्शन गर्नसकिने र प्रशंसा पनि मिल्ने छ । समाजसेवा तथा राजनीति एवम् सामाजिक संघसंस्था आदिको कामकार्यमा पदप्रतिष्ठा र जिम्मेवारी मिल्नसक्ने छ । व्यवसायिक उन्नति हुनेछ भने अड्केर रहेको काम बन्नेछ । पेशा एवम् व्यापार व्यवसायबाट राम्रै लाभ गर्न सकिने छ । परिवारिक सदस्य वा स्वजनको बृद्धि हुने तथा कामकार्यमा साथ मिल्नेछ । प्रतिस्पर्धामा सफल, व्यवसायिक लाभ, रोकिएको काम बन्ने, विजय एवम् प्रशंसा–पुरस्कार र व्यवसायिक लाभ मिल्नेछ ।
मीन राशिका व्यक्तिहरुको लागि आजको दिन यद्यपि दिनलाई सकारात्मक नै मान्नसकिन्छ तथापि मुख्य कार्यमा अदृष्य रोकावट तथा बाधाब्याबधान आउनसक्ने कुरालाई गोचरले देखाइरहेको हुनाले त्यसको निवारणको लागि गणेशभक्ति हितकर हुनेछ । सामान्यतया ढुकुटीमा खजाना तथा धन दौलत जम्मा हुनेछ । वाणी सिद्धिकर दिन परेकोले मान्छेहरुलाई बोलीवचन तथा तर्क आदिले प्रभाव पार्न र समर्थन लिनसकिने देखिन्छ । आफन्तहरूबाट सहयोग पनि मिल्ने र उत्साह तथा उमङ्गमा बृद्धि हुनेछ । केहीहद्सम्म व्यवसायिक प्रगति भई धन–सम्पत्तिकोे संग्रह पनि हुनेछ ।